धुर्मुस–सुन्तली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी — Imandarmedia.com
धुर्मुस–सुन्तली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौ। कलाकार सिताराम कट्ट्ल धुर्मुस र कुन्जना घिमिरे सुन्तली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ। चितवनको भरतपुरमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरुले संचालन गरेको फाउण्डेसनविरुद्ध उजुरी परेको हो।
रंगशाला निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै फाउण्डेसनविरुद्ध इमेलमार्फत् उजुरी प्राप्त भई दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
उजुरीकर्ताले विभिन्न दातृ निकायको सहयोग, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहयोग तथा सरकारी संयन्त्रको रकम समेतको सहयोगमा बन्दै गरेको रंगशालामा खर्च भए बराबरको काम नभएको र फाउण्डेसनले,
नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उजुरी परेसँगै उक्त उजुरी दर्ता भएको र अब अनुसन्धान सुरु हुने उनले बताए।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले बनाउने भनेको रंगशालामा हालसम्म ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ। रंगशालाको भौतिक प्रगति भने जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
करिब ३ अर्ब लागतमा बनाउने भनिएको रंगशालामा अनुमान गरिए अनुसारको सहयोग प्राप्त नभएको र आफूहरुलाई १७ करोड ऋण लागिसकेको भन्दै धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले स्वामित्व ग्रहण गरिदिन भरतपुर महानगरलाई आग्रह गरेको थियो।
तेस्तै, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री आज आफ्नो कार्यसमीक्षा र प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दैछिन्। कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा उनले आज मध्यान्न पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
गत असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले २२ असाेजमा मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। २२ असाेजमा १६ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपिँदा झाँक्री पनि सहरी विकासमन्त्री बनेकी थिइन्। उनी आज १०० दिने प्रगति सार्वजनिक गर्न लागेकी हुन्।
यो पनि, मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्दा जेल सजाय पाएका डाक्टर धनीराम: मैले २५ वर्ष पहिले मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेको थिएँ । त्यतिबेला आफ्नो शोधको आधारमा मैले संसारलाई बताएको थिएँ कि सुँगुरको प्रत्येक अंग मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ।
तर मलाई कसैले साथ दिएनन् र यहाँको सरकारले मलाई जेल हाल्यो। अब यति लामो समयपछि अमेरिकी चिकित्सकले गरेको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणलाई विश्वले एक सफल प्रयोगको रुपमा हेरिरहेको छ । जबकि यही शोध र प्रयोग सबैभन्दा पहिले मैले गरेको थिएँ’ – ७१ वर्षका ट्रान्सप्लान्ट सर्जन डा. धनीराम बरुआ यसो भन्दै रिसमा जोड जोडले टेबल ठोक्छन् र चिच्याउन थाल्छन् ।
स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा रोयल कलेजबाट कार्डियो सर्जरी अध्ययन गरेका डा. धनीराम त्यो घटनालाई सम्झिँदै भन्छन् ‘आज पूरै विश्वमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणको कुरा भइरहेको छ तर मलाई त्यतिबेला जेलमा हालियो।
मेरो इन्स्टिच्युटमा तोडफोड गरियो। म ४० दिन जेलमा बस्नु पर्यो। सरकार वा चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने कसैले पनि मेरो मद्दत गरेनन् । आज पनि ममाथि त्यो मुद्दद्दा चलिरहेको छ।
एक प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. धनीराम भन्छन् ‘मैले ग्लासगोमा कार्डियो सर्जरी गरेपछि बेलायत, अबु धाबी समेत कैयौं देशमा काम गरें । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भनेपछि म आफ्नो देशमा फर्केर आएको थिएँ।
तर त्यतिबेला यहाँको सरकारले मसँग धेरै नराम्रो गर्यो । जेलबाट बाहिर आएपछि पनि मैले आफ्नो शोध जारी राखें । अहिलेसम्म मैले २३ यस्ता औषधि आविष्कार गरेको छु जसबाट मुटु, एचआइभी, मधुमेह जस्ता रोगको उपचार भइरहेको छ।